Nisy zavatra ratsy tamin'ity fomba ity ... | Martech Zone
Efa nahatsapa ianao fa hisy zavatra tena ratsy tokoa hitranga?
Pikantsary an'i Vista saika hihazakazaka amin'ny MacBookPro misy Parallels 3.0 sy OSX Leopard.
Tags: Androidpaomakaratra krismasySerivisy ho an'ny mpanjifadoka amin'ny lalaosehatra doka findaydoka amin'ny findayServiceStructure
Doug !!!!!! Handeha amin'ny toerana maizina ianao !!!!! 😉
Tokony ampidiro ao anaty lahatsoratra bilaogy ny laharam-pianarako anglisy - mahay mandanjalanja! (Macbeth dia varotra ratsy lazaiko aminao.)
Na izany na tsy izany, misalasala aho fa hiasa eo ambanin'ny tontolon'ny VM i Aero Glass - ahitsiho aho raha diso aho.
Mar 11, 2008 ao amin'ny 9: PM PM
Parallels dia mampanantena famotsorana amin'ny faran'ity taona ity izay manohana an'i Aero! Fa amin'izao dia tsy mandeha.
Mar 12, 2008 amin'ny 9: 44 AM
Nahoana ianao no hanala baraka ny fiadananao milina tsara?!?!
Tsy maintsy nanana XP niaraka tamin'ireo Parallels aho.
Mar 12, 2008 amin'ny 10: 04 AM
Azoko antoka fa tiako ny Vista mihoatra ny Windows 3.11, Windows 95 ary Windows ME. 🙂 Antsoy aho hoe mpamadika, fa tena tiako ny Vista - azontsika atao amin'ny rafitra mega-zanako lahy ary mahafinaritra Aero. Ny OS dia mafy orina ihany koa, tsy mbola nanana olana izahay.
Mar 12, 2008 amin'ny 11: 44 AM
Tsy mbola nanana olana tamin'ny Vista koa aho. Tsy hitako izay atao hoe korontana rehetra.
Mar 13, 2008 ao amin'ny 8: PM PM
Roa taona lasa izay dia nijanona tsy nanana olana tamin'ny Windows XP aho. Fanamboarana tsotra fotsiny no natao; esory ny plug-jiro ary afeno ao anaty zoro ilay boaty volondavenona ratsy tarehy. Joro maizina sy maizina.
Talohan'ny x-mas dia tena te-hanandrana programa iray izay tsy miasa afa-tsy amin'ny Window aho. Taorian'ny fanamboarana bibikely 8 ora, nanandrana nametraka indray ny WinXP, dia nohajaina tamina rindrambaiko tsy nahitam-bokatra toy izany aho, hany ka nandao ny tetik'asa iray manontolo aho, ary nandoa tamim-pifaliana vola be lavitra ho an'ny programa Mac izay tena miasa.
Oops, rohy diso. Ity misy iriko halefa: